LABBISKA UGU SARREEYA EE SAARISTA DIGAAGGA IYO DIGAAGGA. SIDA LOO QUUDIYO DIGAAGGA EE COOP DIGAAG - BEERAHA DIGAAGA
Sida loo quudiyo digaagga
Wax kasta oo ujeedada ugu muhiimsan ee digaagga, caafimaadka shimbiraha iyo tayada sifooyinka wax soo saar leh ayaa ah muhiimad weyn.
Waa maxay quudinta, waa maxay quudinta, iyo inta jeer ee - su'aalaha asaasiga ah ee beeraleyda digaaga kasta.
Nadaafad habaysan oo quudin ah digaagga ayaa saameyn ku leh caafimaadka iyo wax soo saarka (ukunta oo dhan sanadka oo dhan). Tilmaamaha tayada iyo nafaqada ee cuntada waxay ku xiran tahay habka isu-dheellitiran ee karbohidraatka, borotiinka iyo dufanka ku jira, iyo sidoo kale helitaanka fiitamiinada iyo macdanta muhiimka ah.
Sareeyaal. Qeybta ugu weyn ee unugyada, iyo sidoo kale qaybta ugu weyn ee ukunta. Waxaa jira khudrado (ku yaalliin cagaaran, rapuseed, soybean, cake) iyo xayawaan (oo laga helay cuntada lafaha, mollusks, wormworms, amphibians, qashinka kalluunka) noocyada dufanka. Labaduba waa kuwo faa'iido leh.
Fat Waxay sameeyaan tamab ah tamar oo ku ururta maqaarka hoostiisa waana la wada baabbi'inayaa markii ukumo la sameeyay. Si ay u buuxiyaan quudintooda, hadhuudh iyo miro ayaa lagu daraa.
Carbohydrateska. Waa lagama maarmaan si loo ilaaliyo shaqada xubnaha iyo murqaha. Qadar weyn oo iyaga ka mid ah ayaa ku jira baradho, dabacasaha, bocorka, xididdo, qolofta oo dhan.
Vitamiin. Qaybaha muhiimka ah. Gaar ahaan fitamiinada A, D iyo B. Baxitaankoodu wuxuu ku hanjabaa kororka dhacdooyinka iyo hoos u dhaca wax-soo-saarka ee digaagga. Cawska Cagaaran, Cunnuunka, Hilibka doofaarka, saliida xayawaanka, silajka ayaa ah kuwa ugu muhiimsan ee fiitamiinada ee cuntada digaagga.
Maaddooyinka macdanta. Qaybta dhismaha shimbirta shimbirta iyo qolofta ukunta. Iska ilaali joogitaanka gravel, feeraha, lime, qolofka la jajabiyey ee kaneecada qaarkood.
Digaagga waxay u baahan yihiin daryeel dheeri ah oo dheeri ah iyo raashin quudin gaar ah, oo hodan ku ah fitamiinada, macdanta iyo borotiinka. Intaa waxaa dheer, qaybaha ayaa la yareeyey, iyo quudinta cusub ayaa si tartiib tartiib ah loo bilaabay. Ha ilaawin inaad cabto waxyaabaha leh ascorbic acid iyo glucose maalmaha ugu horreeya ee nolosha xayawaanka yaryar.
Waa muhiim! Tayada raashinka quudinta waxaa lagu go'aamiyaa hannaanka shimbirta, kaas oo ku jira qof caafimaad qaba oo leh mid adag, midab madow leh oo leh caarad cad. Isbeddel kasta oo ka yimaada qaabka caadiga ah ayaa ah in dib loo eego qaybaha quudinta iyo habka nafaqada.
Biyo la'aanta waxay sababi kartaa dhimasho chick. Nolosha iyo sifooyinka wax soo saarka dadka waaweyni waxay ku xiran yihiin inta badan daryeelkooda iyo quudinta da'da yar.
Waxa la siinayo digaagga
Jirka digaaga waxaa lagu gartaa dheef-shiid kiimikaad hooseeya iyo dheef-shiid kiimikaad ah. Taasina waa sababta ay dalaggu u noqdaan nuujinta ugu doorbidata digaaga waxayna ku jirtaa 60% cuntadooda.
Miraha oo dhan iyo mid la jajabiyey si isku mid ah ayaa si fiican loo cunaa digaagga. Qadarka borotiinka ee miro ayaa yar yar, taas oo macnaheedu yahay in la siinayo cuntooyin hodan ku ah borotiinka (cuntada lafaha, digirta, qashinka kalluunka).
Xilliga kuleylaha, waxaad doorbideysaa:
shaciir - hilibku wuxuu noqdaa dhadhan fiican oo casiir leh;
miro, laakiin aan ka badnayn 20% oo ka mid ah hadhuudhkii oo dhan maalintii, sida cuntada culus ee digaagga;
masago, waa suurad wacan in la siiyo dadka waaweyn, sida hadhuudhku ku jiro fiber oo xaddi xad dhaaf ah.
Jiilka dhalinyarada ayaa beddelaya masago.
Xilliga qaboobaha, quudinta:
hadhuudh, kaas oo ka kooban xaddi badan oo dufan nafaqo leh, carbohydrates iyo dareeraha;
qamadida, ilaha fiitamiinada B iyo E;
barkada, laakiin aan ka badnayn 10% oo ah hadhuudhkii oo dhan maalintii (cunto culus for digaagga);
gabbaldayaha iyo geedka karkhiga, taas oo gacan ka geysaneysa raasamaalka kaydinta baruurta iyo tamarta marka ay dhacdo cimilada qabow. Sidoo kale waxay gacan ka geystaan ​​kordhinta hawlaha digaaga, taasoo keentay in wax soo saarka ukunta oo kordhay.
40% ka mid ah cuntooyinka asaasiga ah waxay ku dhacaan khudradda cagaaran, cagaarka cagaaran (hay), xayawaanka xoolaha, iyo macdanta macdanta.
Ma taqaanaa? Dadka qaarkiis waxaa ka mid ah jilicsanaan (alektorophobia) - cabsi diiqad ah oo dhan digaag. Waxay xitaa noqon kartaa baadad iyo ukunta digaagga. Bukaanka ayaa argagax leh marka ay arkaan sawir aan waxba galabsan oo digaag ah.
Joogitaanka beerta khudradda waxay fududeyneysaa geedi socodka samaynta dalagga xididada geedi socodka quudinta.
Khudaar waxtar leh oo loogu talagalay dadka dhalinyarada ah iyo kuwa qaangaarka ah waa:
Qeybta raashinka ee aadka u muhiimka ah waa dabacasaha, maadaama ay u tahay sheyga saliidda kalluunka waxayna kordhisaa kororka tirada ukunta la dhigay.
Maalintiiba waxay u baahan tahay 20 g oo ah karootada cayriin ama 7 g oo la qalajiyey halkii cutub oo digaag ah. Khudaarta waxaa lagu sifeeyaa xayrta ka hor inta aan la isticmaalin oo isla mar ahaantaana la siinayo tiro cagaaran ama cadaan ah.
Cunto quudin (hay) waxay bixisaa digaaga oo leh vitamiin iyo macdan aad u muhiim ah, waxyaabo kale oo waxtarka leh ee isdaba-marinta cuntada. Qiyaastii 20% cagaaran waa in ay joogaan heerka maalin kasta ee dhammaan quudinta. Guga iyo xagaaga, digaagga bilaashka ah ayaa raadinaya cagaaran iyaga keligood.
Xayiraadaha xoriyadda dhaqdhaqaaqa, digaagga waa in la siiyaa:
Wax soo saarka ukunta digaaga ayaa lagu go'aamiyaa jiritaanka cagaar iyo khudaar cagaaran.
Baro sida loo kordhiyo wax soo saarka ukunta ee digaagga xilliga qaboobaha iyo waxa fitamiinada loo baahan yahay tan.
Waa lagama maarmaan inay ku noqdaan xayawaanka sare.
Cuntada cagaaran ee aan dhicin xilliga jiilaalka waxaa loo tixgeliyaa cirbado geedo ah, oo ay ku jiraan carotene iyo fitamiin C, kuwaas oo awood u leh inay kiciyaan rabitaanka cuntada iyo hagaajinta hawsha dheef-shiidka.
Ma taqaanaa? Ayam Tsemani - noocyada dillaacsan ee digaagga ee Indonesia. Sababtoo ah hyperpigmentation ee uu keeno hiddo-wadaha, digaagga waa madow, ma aha oo kaliya dibadda, laakiin sidoo kale gudaha: carrabka, hilibka, xubnaha gudaha iyo lafuba way madow yihiin. Dhiiggu waa guduud mugdi ah. Waxay iyaga u soo qaateen mucjiso.
Quudinta xayawaanku wuxuu siinayaa jidhka shimbiraha leh astaamiyo amma asaas ah oo leh saameyn togan ee koritaanka iyo ukunta wax soo saarka digaaga.
Qaybaha waxtarka leh ee soo socda ayaa kala duwan:
caanaha - aad u faa'iido leh digaagga; waxay noqon kartaa kefir ama jiis, iyo caleenta waxaa la siin karaa meeshii biyo ah;
hilibka iyo cuntada lafaha - ku dar mashiinka;
qashinka hilibka - waxay siiyaan wax soo saarka korodhka (kahor isticmaalka, karkarinta iyo wejiga);
kalluunka iyo kalluunka - kobciya jirka digaag leh kalsiyum iyo fosfooraska, samaynta ukunta adag;
lafaha - waxaa la siiyaa shimbirta qaab la jajabiyey, kor u kaca wax soo saarka ukunta;
Gooryaanka - waxaa la siiyaa haddii shimbiruhu aanu ku socon dabeecadda isla markaana aan soo saarin iyaga.
Halbeegyada wax-soo-saarka macdanta waxaa ka mid ah:
Digaagga bilaashka ah ee lafdhabarka laftiisa ayaa ka abaalmariya la'aanta waxyaalahan faa'iido leh. Xaaladaha kale, waxay ku shubeen nuujin gaar ah.
Qaybaha muhiimka ah ee muhiimka ah ee cuntooyinka cuntooyinka ee lakabyada waa caano iyo biyo cad. Haddii aanay ka qaybqaadan, dheef-shiidka caadiga ah iyo horumarka buuxa waa mid aan macquul ahayn. Biyaha isbeddel sida nadiifinta.
Loo baahan yahay quudin siisid digaag
Xulashada ugu wanaagsan ee quudinta wanaagsan ee digaaggu waxay noqon doontaa cunto qalalan. Waxaa loogu talagalay si gaar ah si loo kordhiyo wax soo saarka ukunta iyo nafaqada isku dheelitiran ee digaagga, oo ka kooban dhammaan fitamiinada, macdanta iyo qaybaha kale ee muhiimka ah.
Khasaaradaasi waa kharashka aadka u sarreeya, sidaas darteed, qiimaha ukumaha ayaa kordhaya. Tixgeli tusaalooyinka quudinta lakabyo la'aan.
Cuntada digaaga ee maalin walba waa inay ku jiraan maaddada oo dhan, bur, cagaar, caanaha vitamiin iyo macdanta, halka ay muhiim u tahay bedelida noocyada hadhuudhka, bur iyo wax lagu daro. Quudinta macdanta iyo biyaha cusub waa in had iyo jeer joogtaa.
Tilmaamaha xagaaga ee qaybaha muhiimka ah ee quudinta maalinlaha ah ee lakabyada waa:
hadhuudh - 50 g;
bur bur - 50 g;
fitamiin hay-raashin - 10 g;
cunto adag oo casiir leh - 30-50 g;
quudinta borotiinka - 10-15 g;
cunto lafo - 2 g;
macdanta macdanta iyo milixda - 5.5 g.
Tilmaamaha qaboobaha ayaa lagu daray masho qoyan iyo baradhada, beddelidda cagaarka cusub.
Raashin maalinle ah sida:
Mash - 30 g;
baradhada - 100 g;
cake iyo cunto - 7 g;
burka ama cawska qallalan - 10 g;
yogurt ama caanaha - 100 g;
milix iyo macdanta macdanta - 5.5 g.
Ku darida qolofta ukunta oo la cuno waxay keenaysaa in kororka tirada ukunta la dhigo.
Heerkulka digaaggu wuxuu saameeyaa joogtada iyo tayada quudinta. The hooseeyo waa, badanaa iyo ka sii fiican nafaqada ee digaagga. Iyo, si tartiib ah, qol diirran u baahan yahay in lagu kormeero qiyaasta ku filan biyaha, taas oo ah heerkulka qolka.
Waa muhiim! Dhammaan qaybaha cuntadu waa inay ahaadaan tayo sare leh. Maqnaanshaha mid ka mid ah waxay keenaysaa beddelka nafaqada oo u dhigma. Dib u dhigista digaagga waa in aan la dhaafin, haddii kale waxay noqon doonaan kuwo ku baxa dufan iyo baro joog.
Xilliga jiilaalka, daawashada dheeraadka ah ee boodhadhka cuntada, kaabajka, xididdo calafka. Guga kulul iyo xagaaga ayaa gacan ka geysta kordhinta cuntada cagaaran, hodan ku ah fitamiinada.
Cuntada waa ineey joogtaa:
Guga la kariyey - 40 g;
Khamiirka Beeraha - 3 g;
hadhuudh (optional) - 50 g;
caws ama caws (jarjaran) - 15 g;
cake (gabbaldayaha) - 15 g;
qolofka ama ukunta - 25 g;
cuntada lafaha - 3 g;
cusbo - 3 g
Waa muhiim in la ogaado kaliya maaha waxa aad cuni karto layers, laakiin sidoo kale waxa aan macquul ahayn.
Aynu soo wacno badeecooyinka la mamnuucay:
rootiga cad, kibista - rooti waa madow, qalajin, qooyay biyo ama caano ka hor intaanay cunin;
cusbada ama kalluunka cusub - waxaa fiican in la siiyo kalluunka la kariyey ama qashinka kalluunka, iyaga oo ku daraya quudinta ugu weyn;
xididada - laguma talinayo in la siiyo khudradda lafteeda (sababo shuban), laakiin waxaa lagu bixin karaa foomka quudinta ama dusha sare;
miraha liinta iyo ciirkooda;
cuntooyinka macaan iyo cusbada.
Waxaan qeexeynaa talooyinka ugu muhiimsan ee ku saabsan quudinta digaagga.
Shimbiraha quudinta waa inay noqdaan saddex jeer, isku dheeli tiran oo sax ah.
U hoggaansamida habka saacadlaha ah ee cuntada la qaato waa inay noqoto mid khasab ah, iyo haddii ay suurtagal tahay, isla saacado isku mid ah inta u dhaxaysa quudinta. Xilliga cimilada qaboobaha, biyaha iyo mashiinka waa inay ahaadaan kuwo kulul.
Baaxad-darradu waxay leedahay saameyn hooseysa waxsoosaarka ukunta.
Biyaha cabbayaasha waa inay nadiif ahaadaan.
Xilliga dayrta ee molting waa in ay baraan kala duwanaanshaha cuntada, iyo sidoo kale waxaa lagama maarmaan ah in la geliyo sulfur iyo qolof ah la jajabiyey galay feeders.
Gooryaanka khaaska ah ayaa quudinaya geedka digaagga
Marka uu ku dhaco gooryaanku ma saameynayaan uun shimbirta oo keliya, laakiin sidoo kale ukumaha ay soo saartey, qolofka oo noqda mid jilicsan, iyo xinjirro ayaa laga helaa gudaha. Digaagga isla mar ahaantaana si xun oo cunsuriyad leh cunaan, baaluqyada waxay helayaan muuqaal aan muuqan oo aan muuqan, maqaarku wuu baxaa, shuban soo baxaa, neefsashadu waxay noqotaa mid culus.
Baro wax badan oo ku saabsan sida loo daweeyo Gooryaanka digaagga, iyo sidoo kale sida loo siiyo daroogada "Alben" si digaagga loogu talagalay gooryaanka.
Helitaanka calaamadaha dirxiga ee ku sumooba ugu yaraan hal qof ayaa u baahan daaweyn degdeg ah iyo tallaabooyin ka hortag ah. Waxtarka ugu fiican ee daaweyntu waa daawooyinka xoolaha ah oo burburin kara dulinka dadka waawayn iyo ukumaheeda.
Aynu sheegno ugu waxtarka badan:
"Fenenvet" - budada 1% iyo 2.5%, ku shubay quudinta. Marnaba ma jabin karo qiyaasta la cayimay;
Levamisol Plus - biyaha ku dhex dar oo ku dar cabista Ha badalin sharciyada daroogada naftaada;
Piperazin - Kiniinnada waa la jajabiyaa oo biyaha lagu kala diraa. Isku darka waxaa lagu waraabiyaa digaagga qaangaarka ah iyo xayawaanka yaryar (1/3 kiniin ah halkii kg ee miisaanka);
Pyrantel - Koorsada daawada waxaa la qaadaa saddex jeer, inta u dhaxaysa lix maalmood oo nasasho ah. Ka dib marka la dhammeeyo daaweynta, hilibka digaaga waa in aan la cunin 2 bilood, iyo ukumo waa in la cunaa afar maalmood ka dib qiyaasta ugu dambeeysay ee daawada.
Dadku waxa ay ka dhigan yihiin in ay la macaamilaan "aan la martiqaadin" martiqaadka ayaa maraya imtixaanka waqtiga iyo xaaladaha qaarkood si guul ah ula qabsanaya dhibaatada.
Waxaa muddo dheer loo adeegsaday:
basasha cagaaran oo la jarjaray;
toonta la jajabiyey;
berry ee toonta duurjoogta ah;
decoction ee cirbadaha (jarjar iyo ku shub biyo karkaraya);
Habka ugu caansan waa abuur bocorka, kuwaas oo si fiican loo jajabiyey, ku shubay biyo, ku adkeyso 3-4 saacadood. Wixii ka hortag ah, waxaad ku dari kartaa miraha tamarta qorraxda ah ee raashinka quudinta. Waxaanu diirada saarnaa xaqiiqda ah in daaweynta dadku ay wax ku ool u tahay marxaladaha hore ee cudurka iyo sida tallaabooyinka looga hortago cudurrada.
Si taxadar leh u fiirso dabeecadda iyo xaaladda guud ee shimbirta, fiiri heerarka nadaafadda, fulinta tallaabooyinka ka hortagga, iyo khatarta caabuqa waxay noqon doontaa mid aad u yar.
Noocyada dheellitirka macdanta
Macdanta waxaa loo qaybiyaa makro-yar iyo nafaqeeyayaal yar yar. Dheeraadka macdanta ee digaagga ee beeraha guriga inta badan waxay ka kooban yihiin macronutrients.
Wax badan ka baro waxa ku saabsan macdanta dheeraadka ah ee digaaga aad u baahan tahay iyo sida aad naftaada u dhigi lahayd.
Hoyga, digaagga, sodium, koloriin, kalsiyum iyo fosfooraska ayaa noqda macnaha ugu muhiimsan. Seedium aad buu muhiim u yahay digaagga si loo soo celiyo hawlaha taranka. Broilers waxay u baahan yihiin iodine iyo manganese ka badan noocyada kale ee digaagga.
Digaagga dib udugga wuxuu u baahan yahay macdanta macdanta ee soo socda:
cusbo. Waxay ka kooban tahay sodium iyo chlorine. Salmon la'aanta waxaa lagu muujiyaa hoos u dhaca tirada ukunta la dhigo, isbeddel ku yimaadda xaaladda qolofka, hoos u dhaca koritaanka shimbirta, muuqaalka kicinta iyo guud ahaan murqaha guud ee digaaga. Ku dar qadarka miisaanka 0.2-0.4% (2 g halkii maalinba);
dekedda. Waxay ka kooban tahay 38% kalsiyum, iodine, magnesium. Layersku waxay si joogto ah u lumiyaan calcium marka la sameynayo qolofta ukunta, iyo broilers iyo digaagga ayaa loo isticmaalaa nidaamka qalfoofka. Qiimaha maalintii ee dadka waaweyn waa 6-9%, digaagga 1-1.2%. Astaamaha la'aanta halbeeg waa isbedelka qolofka (ama maqnaanshaha) iyo jilicsanaanta lafaha miskaha. Qaybta Caspian waa mid jaban oo tayo sare leh;
digaagga digaagga. Waxaa ku jira 75-85% kalsiyum. Tirada timirta maalin walba waa 0.5-3.0%;
xumbada. Waxay ka kooban tahay qiyaastii 32% kalsiyum, qaar ka mid ah birta, sulfur, magnesium. Qiyaasta maalin walba - 3-4%;
ukunta. Waxay u adeegtaa ilaha dhamaystiran ee kalsiyum iyo macdano kale. Ka hor inta isticmaalka, qolof waa la kariyey iyo la jajabiyey, ku daray in feed ah at heerka 10-15 g halkii cutub ee xoolaha waaweyn. Sicirka maalin kasta ee digaagga - 2%;
phosphates. Kuwaas waxaa ka mid ah quudinta fosfateed ee la kariyay, mono-, di- iyo fosfatta triccium, oo loogu talagalay la'aanta fosfooraska. Qaybtan waa in lagu dheellitiro calcium. Heerka kalsiyumka ee fosfooraska waa 3: 1 (ukumaynta u dhiganta 6: 1), digaagga waa 2: 1. Marka la eego qadarka la yaqaan ee kalsiyum, xisaabi heerka loo baahan yahay ee fosfooraska. Waxaa lagu talinayaa in lagu daro si sahlan oo loogu talogalay fosfateerka triccium ee naas-nuujinta. Kaalmada maalinlaha ah ee dadka waaweyn - 1.5-2%, digaagga -0.5-1%;
ash alwaax. Waxay ka kooban tahay calcium 33%, fosfooraska 2%, sodium 9%, potassium 7%, magnesium 7%, manganese 0.47%, birta 0.8%. 10 garaam halkii qayb oo xoolo ah ayaa lagu daraa quudinta ama lagu meeleeyay quudin gooni goor ah;
sapropel ama siltada harada. Waxa ku jira borotiinka (ilaa 6%), kalsiyum (1.2%), iyo waliba waxyaabo kale. Ku dar 20 g halkii cutub oo qaan-gaar ah, heerka caadiga ah ee digaagga waa 5-15%.
Qiyaasaha kor ku xusan waxaa loogu talagalay hal madaxa ah ee diga ama 1 kg oo isku qasan oo qalalan oo loogu talagalay xayawaanka yaryar iyo broilers. Markaad xisaabiso, maskaxda ku hay in lafaha iyo hilibka iyo lafaha cuntada, marka lagu daro borotiinka, waxaa jira waxyaabo badan oo kalsiyum iyo fosfooraska, iyo cuntada kalluunka sidoo kale waa mid hodan ku ah fosfooraska waana la cusbayn karaa (macdanta dhaadheer ayaa yareysa ama joojisa).
Waa muhiim! Joogitaanka milixda ka badan 0.7% ee cuntada ayaa leh sumayn, iyo 1% waxay sababi kartaa dhimasho. Waa mamnuuc in la isticmaalo quudiyo diyaar ah oo loogu talagalay xayawaanka (doofaarka, lo'da), sababtoo ah qiimaha cusbada halkan aad ayuu uga sareeyaa shimbiraha.
Cunnooyinka cagaaran waxay u baahan yihiin koror cusbo ah ee quudinta si 0.5-0.7%, maadaama ay lagama maarmaan tahay in lagu dheellitiro tiro badan oo potassium ah cagaarka. Cunto xad dhaaf ah oo macdanta ah ma aha mid waxyeello leh, waxay keenaysaa in la cuno cunto aan la dhammaystirneyn iyo in la helo koritaanka shimbirta.
Waxaa jira fitamiino iyo macdano diyaarsan. Isticmaalkooda waxaa xaq u leh cuntooyinka saboolka ah iyo horumarka aan fiicnayn ee ka kooban qaybinta dhalinyarada iyo dadka waaweyn.
Waa kuwan tusaalooyin ka mid ah fitamiinada iyo macdanaha:
"Yard Country". Faytamiin iyo macdanta macaan ee digaagga. Qiyaasta - 1 g halkii madax.
"Ryabushka". Waxay ka kooban tahay fitamiino iyo walxo farabadan - birta, naxaas, zinc, manganese, cobalt, iodine, selenium. Qiyaasta - 0.5 g halkii madax.
"Agroservice". Waxaa ku jira borotiinno, fitamiino iyo qaybta macdanta - kalsiyum, fosfooraska, birta, naxaasta, zinc, manganese, cobalt, iodine, selenium. Sii heerka 10 g ah per head of digaag.
Haddii aad haysato digaag yar, waa ku filan inaad bixiso ukunta ama qoryaha qoryaha.
Biyaha waa qaybta ugu weyn ee noolaha nool. Waxay u dhiman tahay dhimasho. Biyaha nadiifka ah ee nadiifka ah waa in ay marwalba noqdaan, iyo helitaanka ma aha mid xadidan waqtiga, booska iyo xorriyadda dhaqdhaqaaqa.
Maskaxda ku hay in baddalaadda biyaha ee lakabka waa amar aad u weyn oo ka badan kuwa broilers. Inta lagu jiro maalintii waxay cabtaa galaas biyo ah. Quudinta qalalan waxay ku kordhineysaa qiyaasta 20-30%.
Digaagga waxay u baahan yihiin nidaam cabbitaan oo gaar ah:
digaagga maalinlaha ah waxay isticmaalaan biyaha kulul ilaa 30 °;
usbuuc waliba biyo cabitaan aan ka yarayn 25 °;
digaagga 21 maalmood oo nolol ah u baahan tahay biyo 17-19 °;
Dhallinyaro 2-bilood ah waxay caadiyan cabbi karaan biyaha qabow - min 10 digrii.
Waa muhiim! Nidaamka cabitaanka dheeraadka leh ee biyaha kulul ayaa ka buuxsamaya xanuunka mindhicirka iyo xanuunnada dheefshiidka.
Холодное питьё способствует снижению её потребления, а значит, помогает удержать в норме влажность птичника.
Количество потребляемой воды зависит от возраста птицы:
до 1 месяца. На грамм корма - 1 мл воды;
больше месяца. На 1,5 г корма - 1 мл воды;
digaagga da'da yar. 2.5 g oo cunto ah - 1 ml oo biyo ah.
Dareemayaasha qoyan waxay yareeyaan cunto qaadashada saddexaad.
Ka taxadar xaqiiqada ah in cabitaanada ay ku yaalaan 10-15 cm dabaqa sare, haddii kale shakhsiyaadka firfircoon ee qashinka ah waxay dhejin doonaan dhoobada. Doorashada ugu fiican waxay noqon kartaa cabitaanka niqaabka. Cabitaanno foorno loogu talagalay dhallaanka waxaa loogu talagalay habdhaqan sida digaagga aan u jebin karin ama aan qoyanayn.
Ma taqaanaa? Frost ilaa -15 °Iyadoo aaney caqabad ku ahayn socodka digaagga. Shimbiraha ayaa bilaabay inay qaniinaan barafka, maxaa yeelay cudurada dhuunta uma cabsiin karaan.
Kaliya korririfka daran waxay xakameyn kartaa maqaarka iyo boogaha, abaalmarinta shimbirta leh boronkiitka. Taasi waa sababta guriggu u samaysto heer kulul oo aan lahayn wax qabad iyo albaab furan.
Caanaha cabitaanka ayaa la mariyaa hal mar bishiiba oo leh hab gaar ah, haddii kale way adag tahay in la iska ilaaliyo faafidda cudurada.
Noocyada looyaqaan ee quudinta, daaweynta iyo ka hortagga cudurrada shimbiraha ayaa kaa caawin doona inaad digaaga digaaga ku ilaaliso sida ugu fiican.